Kufuneka nini ukuba nomntwana wesibini?
Kungekudala okanye kamva, phantse yonke intsapho ebenomntwana omnye, umbuzo uvela, nini ukuqala umntwana wesibini nokuba ingaqala na? Ukuba ekuqaleni abazali abancinci bamiselwa ubuncinci kubantwana ababini, ngoko kufuneka bazigqibelele isigqibo xa umntwana wabo wesibili eza kuzalwa.
Ngokuqhelekileyo kwenzeka ukuba umntwana wokuqala akanalo ixesha lokukhula, kwaye abazali baya kufumanisa ukuba kungekudala uza kuba nodade okanye umzalwana. Le meko yezinto ivame ukuthusa isibini esitshatileyo, sikholwe ukuba kusekuqaleni ukuqala umntwana wesibini. Kodwa makhe ndinike ii-pluses ezimbalwa zenkqubela yobudala. Abantwana abanomncinci weminyaka emininzi banomdla wokudlala kunye, baneminqweno eninzi. Ngomama ngokukhawuleza xa umncinci uya kukhula kancinci, kuya kuba nexesha elikhululekile. Izinto zokuqala ziza kudlulela kwi-heredity ukuya kweyesibini kwaye ayiyi kuba nombuzo, apho ukubeka isikhalazo, isithuthi, xa umntwana wokuqala sele evele kubo. Umama akayi kubuya emsebenzini, aze ahambe ngokuhamba kwekhefu kwakhona, njengoko besithi, ngexesha elinye. Ngokufanayo, ngokusemgangathweni, asinakusho kuphela ngoonyana, imozulu, kodwa nangabantwana abanomlinganiselo weminyaka engama-2-3.
Ukwahlukana kwiminyaka engama- 6-7 kunye neenzuzo zayo. Umntwana omdala sele sele ehamba esikolweni kwaye akafuneki ngqalelo enkulu njengangaphambili, kwaye umama uninzi ixesha lokufundisa omncinci. Umntwana wokuqala unokunceda uMama ngeendlela ezininzi, musa ukuguqula umntwana omdala kumntwana! Ngaphandle koko, uya kuvusa umona wenzana. Ungamphoqeleli ukuba enze into ayifunayo, ngakumbi ekubeni uzimisele ukuba nomnye umntwana.
Iminyaka eyi-16 ukuya kwe-18 ibeletha umntwana wesibini ulungelele abo abangenabo "umama," xa owokuqala ezalwa eneminyaka engama-40. Kule meko, umntwana omdala sele esekhulile, kodwa umama emva kweminyaka emininzi, umama, njengowokuqala. Kodwa umntwana omdala uza kuba neentsapho zakhe kunye nomntwana kwaye omncinci uya kuba nomhlobo oontanga olungileyo.
Kukho nawuphi na, xa kulungele ukuqala umntwana wesibini, kuya kuwe! Abantwana bahlala bevuya! Yaye ukuba ucinga ngale mbuzo, hamba! Yiyiphi impahluko eyenza ukuba yintoni eya kuba ngowokuqala xa umntwana wesibini ezalwa! Kwaye ngokuqhelekileyo, ngokuqhelekileyo, ukugqiba ukuzala omnye umntwana, ngakumbi kwiimeko zethu ezinzima - esi sigqibo esinesibindi kwaye yonke intsapho iyaziqhayisa!
Ungaziqonda njani xa umntu ekhwele?
Ndingayithanda kwakhona umyeni wam
Iimpawu ezisixhenxe ezingasithandi
Uyazi njani ukuba umntu uyakuthanda nawe?
Kutheni umntu efuna uthando?
Iinqwelo zeSalmon kunye neTeriyaki sauce
Umlingane, njengenxalenye yekhofi ye-banal kunye neyeyi
Umvuzo omnyaka omtsha "Isongo seJade"
Indlela yokususa isisu
Uthando kunye nesondo - isiqinisekiso sokuzonwabisa
Gcoba kwiitatata kwi-multivark
Isityalo esitsha sityalo
Isobho esinomdla ovela entliziyweni
Indlela yokugubungela itheyibhiyo yokuzonwabisa kwidili
Indlela yokuphazamisa ukukhulelwa kunye nezilwanyana zomntu?
I-Honey Spas 2016 - imbali yeeholide, izithethe, iingxoxo, izithethe, imithandazo, imiqondiso, into enokuyenza kwaye ayikwazi ukwenza. Ukumncokola nokuhlekisayo kwintetho, imbongo, imifanekiso
I-Tilapia kunye ne-quinoa kunye nekhukhamba
Ikhalenda yemisebenzi engadini ngamaxesha